Kulan dhexmaray Farmaajo iyo Qaar ka mid ah Xildhibaanada Digil & Mirifle. – idalenews.com
Kulan dhexmaray Farmaajo iyo Qaar ka mid ah Xildhibaanada Digil & Mirifle.
Mid ka mid ah musharaxiinta Jagada Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Abdilaahi Farmaajo, oo baryahaanba waday kulamada uu la yeelanaayo qeybaha kala duwan ee xildhibaanada beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa uu kulan gaar ah la qaatay xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka beelaha Digil iyo Mirifle .
Kulankaan oo ka dhacay garoonka diyaaraha Aden Cade ee Muqdisho ayaa waxaa diirada lagu saarayey ka hadalka marxalada uu dalka iminka marayo, taasi oo ay ugu horeyso arrimaha doorashooyinka madaxweynaha ee 10 bishan ka dhici doonta Muqdisho.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Abdilaahi Farmaajo ayaa waxaa uu xildhibaanada u jeediyey fikirkiisa siyaasiga ah iyo inuu diyaar u yahay haddii loo doorto madaxweynaha dalka Soomaaliya inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saartay burburka iyo nidaam la’aanta ragaadisay.
Farmaajo ayaa xildhibaanadii kulankaas ka soo qeyb galey ka codsadey inay codkooda ku taageeraan si uu ugu guuleysto xilka Madaxweynenimada, waxa uuna uga mahadsan celiyey sida ay u soo ajiibeen shirka uu isugu yeeray odayaasha dhaqanka beelaha Digil iyo Mirifle iyo xildhibaanadoodaba.
Xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka beelaha Digil iyo Mirifle ee kulankaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey musharaxnimada Farmaajo waxaana ay dhinaca kale sheegeen inay taageersan yihiin dadaalkiisa uu ku doonayo xilkaasi. Waxaana sidoo kale ay sheegeen inuu Farmaajo qeyb ka yahay rajada Soomaalida.
Xildhibaanada la shiray ee Digil iyo Mirifle ka tirsan waxaan la socon oo ku jirin Shariif Xasan Shiikh Aden oo xurguf siyaasadeed hore dhex marteyFarmaajo,inkastoo wararka iminka xamar ka imaanaya ay sheegayaan inuu jiro xiriiro hoose oo laga dhex bilaabay Farmaajo iyo Shariif Xasan kuwaasi oo ku aadan in codka Shariif Xasan ee ku leeyahay Baarlamaanka inuu ku taageero Farmaajo si uu ugu badsado codadka uu ka helo doono xilliga doorashada.
Shirkaan maanta ay wada yeesheen Musharax xilka Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajoiyo siyaasiyiinta iyo odey dhaqameedka Beelaha Digil iyo Mirifle ayaa waxuu qeyb ka yahay shirar joogto ah oo ay musharaxiintu la yeelanaayeen beelaha kale ee Soomaaliyeed si uu taageero ugu helo tartankiisa iyo hamigiisa uu ku doonaayo inuu ku qabto jagada ugu sareysa dalka.
Healthcare revolution on 21st Century